China namboarina manokana Anti-tendrony fanaka - Mpanamboatra - Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd.
Fitaovana fanaka plastika
Fifanarahana fampitaovana sy kojakoja mifatotra
Mpiaro zorony fanaka
Scru plastika manitatra plug
Vatofantsika lolo manodina plastika
Fitaovana rindrin'ny spiraly
Mpiaro zoro boaty plastika
Tongotra fanaka plastika
Tongony azo ovaina
Fitaovana jiro plastika
Jiro socket fitoeran-jiro
Fanakatonana mpamily plastika
Tady fanaka manohitra tendro
Fitaovana plastika hafa
Home >Products >Tady fanaka manohitra tendro
Fonosana Anti Tip amin'ny Kit vy Metal Kit
Tavoahangy lolo vatofantsika plastika plug nylon rindrina
L miendrika plastika mpiaro
Fitaovana plastika Bulkhead Connector
Mpiaro zoro plastika maharitra 85mm maharitra
Fehikibo fiarovana fiarovana
1. Manana ny ozinanao manokana ianao? Eny, mpanamboatra ao Shina izahay mandritra ny 10 taona mahery. Ny orinasa misy anay dia any amin'ny faritanin'i Guangdong.2. Ahoana no ahafahako mitsidika ny orinasa misy anao? Pls ampahafantaro anay anay mialoha raha mikasa ny hitsidika ianao. Azonay atao ny manoro anao ny lalana na mandray anao eny amin'ny gara na amin'ny seranam-piara-manidina.3. Manolotra santionany maimaimpoana ve ianao? Tsy olana izany, afaka mandefa ny santionany maimaimpoana ho an'ny fanovozan-kevitra izahay.
Misoroka fantsona vy matevina amin'ny fanaka
Ny fanariana fanaka dia mety miteraka ratra, ny piano amin'ny fitaovana tsy afaka manolo ny fanaraha-maso mahomby ataon'ny olon-dehibe. Azafady esory ny fitaovana alohan'ny hamindranao ny fanaka hisorohana ny fahasimbana sy ny ratra. "Azafady apetraka amin'ny toerana sarotra ahatratra ny kitapo plastika mba tsy ho sempotra ny zaza. Tsy azo atao kilalao izy io." Afatory ny kitapo dia ario.
Kit kitay fanakanana fanakanana Anti Tip
Tady fiarovana fiarovana an-jaza
Tady 2 metatra tendron'ny kitapo vy
 No.169, Xianjiang Road, Dalang Town, Dongguan City, Provinsi Guangdong, Sina